Bogga ugu weyn Shaqooyinka Kaaliyaha Virtual ee Bilowga ah
Sida adduunku u sii fidaayo, sidaas oo kale ayaa suurtogalnimada ku dhex jirta. Dunidu waxay sii wadaa inay markhaati ka noqoto ballaarinta dhinacyo badan. Qaar ayaan markhaatiyaal u nahay - sida baahida loo qabo shaqooyinka kaaliyaha dalwaddii ee bilowga ah tobankaan sano, kuwa kale, waxaan garwaaqsanaa xoogaa ka dib.
Inta ugu badan ee ballaarinta socota, dadka intiisa badani waa indha -indheeyayaal. U fiirsiga inta kookadooda la fidinayo si ka baxsan xadka malaha. Qaar kale, kuwa wax ku darsaday, ayaa ah sababta hal -abuurnimada meelaha qaarkood ay u dhacayso haba yaraatee.
Qof kasta oo isticmaalay intarneedka baryahan waa u marag furi karaa xaqiiqda ah in shaqadu ay u guurtay internetka iyo shaqo -bixiyeyaal badan oo u baahan kaaliyayaal waxay shaqaaleeyaan kaaliyeyaasha dalwaddu. Runtu waxay weli tahay in baahida loo qabo shaqooyinka kaaliyaha dalwaddii ee bilowga ah ay sii socon doonto.
Maqaalkani wuxuu sahamiyaa suurtagalnimada sugitaanka 10 bixinta shaqooyinka dalwaddii bilowga ah. Haddii mawduucani yahay wax adiga ku xiiso geliya, markaa sii akhri!
Jadwalka tusmadaan wuxuu soo koobayaa waxyaabaha aad ka heli karto maqaalkan dhexdiisa;
In kasta oo ay run tahay in dalabka kaaliyayaasha dalwaddu ay sii kordhayaan, haddana waa run in dadka bilowga ah ay aad ugu adag tahay inay helaan jagooyin badan oo noocaas ah sababta oo ah carqalado goobta shaqada qaarkood iyo dalabyada loo -shaqeeyaha oo aad u cadhooday.
Caqabada ugu badan ee bilowga ah waa baahida loo qabo waayo -aragnimo hore. Waayo -aragnimo ka timid xaggee? Haa, waayo -aragnimo ka soo jeeda. Inta badan taasi waa su'aasha ugu horreysa ee ku soo dhacda maskaxda kuwa bilowga ah markay la kulmaan dhagaxa qibrada leh.
Sidee qofku u sii wadaa inuu helo shaqo ku -meelgaar ah kaaliye dalwaddii ah marka aad haysato waxyaabo isku mid ah oo ku joojinaya mar walba? Maqaalkani wuxuu tilmaamayaa 10 shaqo oo kaa caawinaya inaad cabirto caqabaddan foosha xun.
Muxuu sameeyaa kaaliyaha dalwaddu?
Kaaliyaha dalwaddu waa xirfadle, ama qaabka ugu aasaasiga ah, qof kasta oo macaamiisha u fidiya adeegyo meel fog iyo adeegsiga kombiyuutar internet-ka awood u leh. Caawimaadani waxay noqon kartaa mid sharci, maamul, farsamo, ama hal -abuur. Ma jiro xad dhab ah. Haddii shaqadu aysan u baahnayn qof jiritaankiisa jir ahaaneed, markaa waa shaqo kaaliye farsameysan oo lacag bixin ah.
10 bixinta shaqooyinka kaaliyaha dalwaddii ee bilowga ah
#1 Kaaliyaha warbaahinta bulshada
Haddii aad waligaa waqti ku qaadatay baraha bulshada, markaa waxaad ku habboon tahay shaqada. Shaqadu kaliya waxay u baahan tahay inaad taqaanid agagaarka aaladaha warbaahinta bulshada ee ku lug leh. Shirkado badan oo u baahan gacan ku haynta baraha bulshada ma yaqaaniin sida loo maareeyo. Halkani waa meesha aad soo gasho.
Shirkaduhu waxay ku wareejinayaan gacmahooda warbaahinta bulshada, waxayna ku siiyaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee la filayo inay ku socdaan gacmahan. Waxaa jira aalado cusub oo baraha bulshada oo soo baxa toddobaad kasta waxaana lagaa filayaa inaad la jaanqaaddo iyaga.
Haddii Facebook, Twitter, Instagram ay yihiin shaygaaga, markaa kani waa shaqada kugu habboon. Waxay u baahan tahay inaad awood u yeelatid inaad sameysid cinwaano indho qabad leh, qoritaanno wanaagsan si aad u ilaaliso kuwa raacsan bogga, oo aad la jaanqaaddo isbeddellada ugu dambeeyay ee dhammaan aaladaha.
Tani waa fursad kale oo aad u adeegsan karto xoogaa xirfadahaaga ah adiga oo ka caawinaya maamulka. Macaamiisha qaarkood oo laga yaabo inay ogaadeen inaysan waqti u hayn qaybta maamul ee shaqooyinkooda ama aysan kaligood samayn karin, waxay kuu soo jeesan doonaan caawimaad.
Maadaama shaqada maamulku ay tahay mid aad muhiim u ah, way soo noqon doonaan haddii aad shaqo fiican qabato. Hawlahaasi waxay ku lug leeyihiin;
Maareynta jadwalka iyo jadwalka.
#3. Abuuritaanka waxa ku jira
Tani waxay ku lug leedahay abuurista, habeynta, iyo maareynta waxyaabaha hal -abuurka leh. Haddii tani ay tahay wax aad jeclaan lahayd inaad lacag ka hesho, waa inaad naftaada diyaar u ahaataa. Macaamiisha u baahan sawirrada hal -abuurka, fiidyowyada, iyo dokumenteriyada ayaa kula soo xiriiri kara oo u adeegsan kara waxaad haysato waxay doonayaan.
Maaddaama abuurista maareynta iyo maareynta ay tahay hawl aad u adag, dad badan ayaa u dhiibi doona kaaliyayaal dalwad si ay uga caawiyaan maareynta. Waxaad ka caawin kartaa maareynta sawirrada, dhejimaha baloogga, garaafyada iyo fikradaha nuxurka cilmi baarista.
XIDHIIDHKA: 25 Shaqooyinka Ugu Walaaca Yar ee Bixiya $5,000 ama ka badan bishii
#4. Adeegga macaamiisha
Shaqooyinka lacag bixinta adeegga macmiilka ayaa sidoo kale loo heli karaa kuwa bilowga ah. Tani waxay ku lug leedahay inaad wax ku barato shirkadda aad wakiil ka noqon doonto. Markaad fahanto waxa lagaa filayo, ayaa markaa laguu gelin doonaa nidaam ay macaamiisha macmiilkaagu soo wici karaan si ay gacan uga geystaan ​​xallinta dhibaatooyinkooda.
Dhowr meelood ayaa la abuuray si ay gacan uga geystaan ​​adeegga nichekan. Nichekani wuxuu u baahan yahay wax yar oo aan hore loogu aqoon qaybta. Meelaha ugu caansan ee aad ka caawin doonto waa kaalmada bulshada iyo farsamada, maadaama ay yihiin kuwa ugu arrimaha badan. Tusaale waa ModSquad.
#5. Soo -dhaweeyaha Virtual
Tani waa shaqo kale oo aadan u baahnayn khibrad si aad u buuxiso. Waxay kaliya u baahan tahay inaad wicitaannada u qaadato sidii soo -dhoweeye dalwad leh oo shirkad ah. Waayo -aragnimada soo -dhoweeye ahaan waa gunno, maadaama ay ka caawiso isgaarsiinta.
#6. Taageerada wada sheekaysiga
Kani waa shaqo kaaliye dalwad leh oo aan u baahnayn khibrad hore ama kaa dalban wax badan. Waxay u baahan tahay inaad internetka joogto ilaa iyo inta shaqadu kuu baahan tahay oo aad la sheekaysato macaamiisha intaad xallineyso arrimaha laga yaabo inaan si fudud loo xallin karin markaad haysato macaamiil ku qaylinaya dhegahaaga.
#7. Farshaxanka codka
Tani waxay u baahan tahay inaad siiso cajalado cod oo loogu talagalay buugaag maqal ah, fiidyowyo, filimaan, iyo inbadan. Waa farshaxanka akhrinta qoraalka iyo ku noolaanshaha codkaaga. Fanaaniinta codadka tayada leh ayaa dalbanaya lacagna waa la siiyaa. Tani waa shaqo aadan u baahnayn wax khibrad ah.
Haddii aad si fiican wax u akhrin karto oo aad ku dhawaaqi karto adigoon wax dhib ah haysan, markaa taasi waa inta ugu badan ee loo baahan yahay.
#8. Turjumaad iyo fasiraad
Tani waxay fursad u tahay kuwa ku hadli kara waxna qori kara in ka badan hal luqad. Waxay siisaa fursad kuwa ku hadla in ka badan hal luqad sida Ingiriisiga inay si fiican u adeegsadaan afafka dheeraadka ah.
Marka turjumaadda ama fasiraadda la sameeyo, waxay siisaa waddo kuwa aan fahmin luqadda aasaasiga ah si ay u helaan macluumaad ay haddii kale lumin lahaayeen. Shaqooyinkan oo kale ayaa la heli karaa waxayna u baahan yihiin dulqaad iyo karti kaliya.
XIDHIIDHKA: 10-ka ugu sarreeya Ciyaartoyda ugu mushaarka badan Forbes 2022
# 9. Faafin
Waxaad u shaqayn kartaa kaaliye caddaynaya dukumentiyada. Tani kaliya waxay u baahan tahay awooddaada inaad ku ogaato khaladaadka iyo samaynta saxitaanka saxda ah. Shaqadan waxaa la samayn karaa wakhti buuxa ama wakhti dhiman. Shaqadu waa mid mushaharkeedu fiican yahay wax badanna uma baahna qofka bilowga ah.
Qoraal -qoristu waa shaqo kale oo aan u baahnayn wax ka badan awoodda dhegeysiga iyo qorista dhakhso. Shaqadan, buugaag maqal ah ama cajalado maqal ah ayaa lagu siin karaa si aad u qorto. Natiijadu mararka qaarkood waxay ku xirnaan kartaa tayada codka, laakiin inta badan waxay ku xiran tahay qofka dhegeysanaya awooddiisa inuu ereyo soo qaado oo si degdeg ah u qoro. Tani waa shaqo mushahar fiican leh, waxayna ku habboon tahay kuwa bilowga ah.
#11. Cilmi -baare internet
Shaqadani waxay u baahan tahay karti sharaf leh oo lagu baadho internetka oo laga soo goosto macluumaadka. Haddii tani ay tahay xooggaaga, markaa waa inaad u tagtaa. Waa mid dalabku sii kordhayo. Shaqada sida kaaliyaha baaraha internetka ee dalwaddu waa mid u baahan in aad isha ku hayso arrimaha danaynaya macmiilkaaga.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaato shaqooyinka waxaad ka shaqayn kartaa gurigaaga, riix halkan!
Waxaa jira fursado shaqo oo badan oo kaaliyeyaasha dalwaddu ugu lacag badan yihiin kuwa bilowga ah. Tani waxay taabatay oogada oo kaliya. Sidoo kale waa fursad lagu kobcin karo fursaddaas oo ahayd arrin.
Lacag Bixin Si Aad U Noqoto Saaxiib Virtual Online ah 2022 [Illaa $ 100/hr]
Tag raadinta shaqooyinka sida kuwa halkan ku qoran. Waxay u badan tahay inaad heli doonto waayo -aragnimada loo baahan yahay ee shaqada.
10 Tallaabo oo Miisaaniyadda Loogu Sameeyay Hab Fudud 2022
Xaaladda Codsiga Kaarka Deynta ee Chase 2022: Mar dambe ha Iloobin Tallaabooyinkan
Jooji Shaqooyinka Baqshadda Hadda! Eeg 30 Shaqada Beddelka Guriga 2022
Haddii aad sameyso liis shaqo oo xalaal ah, mid aan ahayn inuu meesha ugu sarreeyo waa baqshadda.